पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको पुष्टि
नयाँदिल्ली। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको न्युरो-इन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर नभएको चिकित्सकीय परीक्षणमा देखिएको छ। बायोप्सी, डीओटीए एनओसी परीक्षण, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड, पीईटी सीटी स्क्यानसहित अन्य परीक्षणपछि चिकित्सकहरुले ट्युमरमा क्यान्सर नभएको पुष्टि गरेको हुन्।
देखिएको ट्युमरलाई भने ढिला नगरी दुई/तीन महिनाभित्रै शल्यक्रियाद्वारा फाल्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। ‘बेलैमा शल्यक्रिया नभए क्यान्सरको खतरा पनि हुन सक्ने कुरामा चिकित्सकले सोमबारको परामर्शमा सचेत गराउनुभएको छ,’ भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले भने।
फेब्रुअरी २२ बाट भारतको दिल्लीस्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा भट्टराईको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको थियो। उनले प्रा.डा. विक्रम भाटियासँग परामर्श लिएका थिए। भट्टराई लामो समयदेखि पेटको समस्याबाट पीडित थिए। उनले नेपालमा ललितपुरस्थित निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए।
उपचारका क्रममा भट्टराईको पेटमा आमाशय र सानो आन्द्राको बीच भागमा पलाएको थियो। नेपालमा त्यो ट्युमर घातक (क्यान्सर) भएको वा नभएको नखुलेपछि निदानका चिकित्सक डा. निरज जोशीले नै भट्टराईलाई उपचारका लागि चाँडोभन्दा चाँडो दिल्ली जान सुझाएका हुन्।
भट्टराईसँगै प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डे र श्रीमती हिसिला यमी पनि दिल्ली आएका छन्। भट्टराई मंगलबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।